Sekuphele unyaka elinde imiphumela eHome Affairs | News24
LAST UPDATED: 2019-05-21, 10:34
Sekuphele unyaka elinde imiphumela eHome Affairs
OWESILISA waseSweetwaters uthi akasazi ukuthi kumele enzenjani ukuze ezokwazi ukuthi athole izigxivizo zeminwe zikamama wakhe ongasekhko emhlabeni eMnyagweni wezaseKhaya ehhovisini eliseMgungundlovu.
UMnu Mandla Mbhele uthi umama wakhe uNkk Dumazile Ellen Mbele washona ngenyanga kaMbasa (April) ngonyaka owedlule.
Uthe wahamba waya kofaka isicelo sokuthola izigxivizo zeminwe kamama wakhe kulo mnyango ngoba wayefuna ukuthola izimali kweminye yemishwalense ayijoyinile kodw kuze kube manje akakayitholi.
Uthe ngesikhathi eyofaka isicelo bamutshela ukuthi isicelo sakhe sizothatha izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba athole lokho ayekucelile.
“Kuze kube imanje angikaze ngizithole. Njalo uma ngiya khona ngithi ngiyobuza ukuthi kungabe yini evimbile ekutheni ngizithole bavele bangitshele ukuthi namanje azikakabuyi ehhovisi elikhulu ePitoli,” kubeka yena,
UMnu Mbhele uthe kugcine sekumphoqa ukuba azishayelele yena ehhovisi elisePotoli ukuthola ukuthi kungani zingabuyi izithupha zikamama wakhe.
Uthi lokhu kumuphatha kabi ngoba ngisho nabantu bomushwalense sebelokhu bemubelesela befuna lemiphumela ukuze bezokwazi ukuthi bamusize.
“Uma ngabe ngifonela ePitoli bangitshela ukuthi ihhovisi eliseMgungundlovu lathumela izithupha ezingaphelele zikamama.
Ngathi uma ngibuza ukuthi kungani zingaphelele bangitshela ukuthi nabo abazi kodwa leli cala sebeyaliphenya futhi sebevule icala.
“Sekuzophela unyaka manje umama adlula emhlabeni kodwa kuze kube imanje angikwazi ukuthola lemiphumela angazi kungani.
Ingiphatha kabi lento ngoba ayikho nencazelo eqondile engiyotholayo ukuthi kungani kuthatha isikhathi eside kangaka ngoba bangitshela ukuthi kuzothatha izinyanga ezintathu kuphela kodwa manje kuphela unyaka.
Balokhu bethi imiphumela ayikabuyi kodwa futhi abangitsheli ukuthi yini ebambile,” kubeka yena.
UMnu Mbhele uthe useze wazama ngisho ukuthola abameli nokuyibona abazama ukuthi bamusize bamulekelele ngalolu daba.
“Sengiphila ngokuhleli ngigqigqa ehhovisi loMnyango wezaseKhaya njalo ngime ulayini omude njalo ekugcineni futhi ngingatshelwa lutho kuthiwe imiphumela ayifikanga.
Angisazi mina ukuthi kumele ngenzenjani manje ngoba futhi abasho nokuthi kukhona imininingwane eshodayo kodwa nje bathi akukabuyi,” kuphetha uMnu Mbhele.
IMenenja yehhovisi loMnyango wezaseKhaya eliseMgungundlovu uMnu Xolani Maphumulo uthe ulithinthile ihhovisi elikhulu elisePitoli lamutshela ukuthi bekunenkinga yokusalela emuva ngokomsebenzi.
“UMnu Mbhele uzokwazi ukuthi amaphepha lawa awafunayo ngaphambi kokuba kuphele isonto elizayo.”
LIVE: Jacob Zuma continues legal battle for permanent stay of prosecution